Igwe Igwe Igwe Igwe Na-ahụ Maka Ahụ Maka Ọchịchị - OMG Solutions
Network-Worn Camera Security Network maka Gọọmentị
Ọ bụ nchịkọta nke igwefoto ahụ na-eyi:
N'ịbụ onye bi na teknụzụ nke teknụzụ dị elu, akụrụngwa kachasị ọhụrụ abụrụla mkpa nke elekere iji hụ na nchekwa na nchekwa nke ọha. Igwefoto ahụ na-eyi bụ obere ngwaọrụ mmadụ nwere ike iji eriri ma ọ bụ obere akpa kpaa ya ebe ụfọdụ ndị ọzọ nwere ikike ndọta. Mmadu nwekwara ike iru ya n’elu okpu agha ma obu n’ime enyo. Batrị nke ngwaọrụ ọgbara ọhụrụ a na-anọ ihe karịrị awa isii ruo asatọ iji dekọọ ọrịre na-aga n'ihu. O nwekwara ike idekọ vidiyo n’abali ma ọ bụ n’ebe gbara ọchịchịrị. A na-atụ aro ndị ọrụ nchekwa.
Iji igwefoto ahụ nwere ahụ arụ ọrụ dị ka netwọ nchekwa nke gọọmentị:
N'ime afọ ole na ole gara aga, ọ pụtawo nke ọma ịhụ ịba ụba nke ịntanetị. N’otu aka ahụ, n’oge ugbu a, onye ọ bụla nwere ike ibugo vidiyo vidiyo na ọtụtụ nyiwe wee bido n’iru mmiri. N’ezie, Igwefoto eyi n’ahu abụrụla netwọọdụ dị nchebe maka Gọọmentị yana uru na uru ya niile. Mgbe anyị na-ekwu maka nchekwa na nchekwa, ndị ọrụ nchekwa ma ọ bụ ndị ọrụ uwe ojii na-abata n’uche. Ugbu a ọtụtụ gọọmentị steeti emeela ka ndị uwe ojii na ndị ọrụ nchekwa tinye igwefoto nwere ahụ. Teknụzụ kachasị ọhụrụ na-enyere ha aka ịdekọ ihe ọ bụla na-eme na mpụ ahụ ma ọ bụ ọbụna n'oge mkparịta ụka nkịtị mgbe ọ bụla nche njikere. Nke a bara uru nke ukwuu iji mee ka anya doo anya na nghọta ka ọ na-emeso mpụ na mkpọchi nche.
Ka osila dị, Omume ndị uwe ojii na-ahụ n'anya bụ ndị nọ na mbido ya mana ọ na-eji nwayọọ nwayọọ na-aghọ ihe eji emezi ihe na ngalaba ndị uwe ojii yana otu uwe maka ndị ọrụ uwe ojii na mba ahụ dum. Ọtụtụ okwu ikpe dị elu wetaara teknụzụ a n'ihu ọnọdụ ma bulie ọtụtụ ndị ewu ewu. Ugbu a igwefoto ndi ahu bu ihe ohuru bu ndi ohuru n’iwu obodo. Ndị ụlọ ọrụ mmanye iwu na-esonye na mmemme pilot iji nyochaa ike ya.
Ohere nke Netiwu nchekwa nke Gọọmentị:
Kedụ ka igwe na-eyi onodu si enwetara nchekwa nke gọọmentị? Ojiji igwe eji ese ihe eji egosiputa ihe bu ihe omuma na oru nke ndi uwe ojii. Omumu ihe emere gosiri na oganihu abiawo na nka ndi omuma ndi uwe ojii site na iji igwefoto eyi. Nke a na - amụbawanye anya n’etiti ndị uwe ojii. Ha na-amatakwu omume ha na mmekọrịta ha na ọha na eze ma o yikarịghị ka ha gafere akara n'etiti iji ike dị mkpa iji jide ndị na-enyo enyo na ị blaụbiga mmanya oke.
Mmụta sitere na isi mmalite dị iche iche egosiwo na mgbe ndị mmadụ n'otu n'otu chere na ha na-enyocha onwe ha, omume ha ga-agbanwe. Mgbe ha hụrụ onwe ha n’okpuru nlekọta na Ndekọ igwefoto ahụ mebere, ha ga-abụ ndị obi ọjọọ ma gbanwee mmekọrịta ha na onye ahụ na-edekọ. Nchịkọta anakọtara na-egosi na ndị mmadụ, ndị maara nke ọma na anya igwefoto na-elele ha, na-anabata omume ndị a na-anabata ma ọ bụ na-edo onwe ha n'okpuru ọkachasị mgbe onye na-ekiri ya bụ ihe na-achịkwa iwu. Otutu oge n’ọrụ onye uwe ojii mgbe onye ha jidere na akparamagwa ha gosipụtara n’ebe a bụ ihe dị ezigbo iche mgbe ha abụọ zukọrọ n’ụlọ ikpe maka ikpe ahụ. Onye agbachitere ejiji nke na-ekwu okwu na-egbu maramara dị nnọọ iche karịa onye na-a dụbiga mmanya ókè nke sonyere n'ọgụ ma kpọchiri batrị. Ndị ọrụ nyocha chọpụtara nke ọma na mgbe ụlọ ikpe hụrụ vidiyo vidiyo na-egosi ihe ga-adị iche. Ọ nwere ike bụrụ ihe nwute karịa ịbịarute n'ụlọ ikpe ịchọta onye agbachitere eyiri nke ọma na uwe nke mmụọ ozi dị iche na nke ahụ ejidere. Site na iji igwefoto ijide ezigbo agwa onye ahụ na omume ya nwere ike inyere aka mgbe a na-ele ule.
Na mgbanwe omume enwere ike, abamuru ndị ọzọ a ghọtara nke igwefoto eyi maka ụlọ ọrụ na-ebelata mkpesa ụmụ amaala na ojiji nke ndị uwe ojii. Na 2012, Ngalaba ndị uwe ojii nke Rialto, na mkpakọrịta ya na Mahadum Cambridge United Kingdom, mere ọmụmụ ihe otu afọ na nsonaazụ yana nsonaazụ nke ndị uwe ojii na-eyi ese foto. N'ime ihe karịrị otu afọ, e nyere kamera dị iche iche maka igwefoto ebe ndị ọzọ adịghị. Ihe omumu a bu ihe nlere anya nke oge di iche iche n’oge di iche iche. Mgbe oge afọ niile gachara, ihe ndị ọ rụpụtara na-eju m anya. Otu ndi ahu ekenyero igwefoto ahu ha kariri 60% site na nmalite. Ọmụmụ ihe ahụ kọkwara na mkpesa ụmụ amaala banyere otu ahụ belatara site na 88% karịa mkpebi ikpe gara aga. Onye isi ndị uwe ojii Rialto kwuru na mbelata nke ọnụ ọgụgụ mkpesa ahụ bụ n'ihi ndị uwe ojii na-eme omume ka mma ma ọ bụ ụmụ amaala na-akpa àgwà ka mma, ma eleghị anya ntakịrị ntakịrị.
N'ọmụmụ ihe ọzọ na igwe onyonyo eyi uwe eji echekwa ya na otu o si ebelata mkpesa ụmụ amaala, Ngalaba ndị uwe ojii Mesa mere otu ọmụmụ n'afọ a na-elekwasị anya na mbenata mkpesa. Ihe omume ndi otu ubochi a mebere; Ndị ọrụ nchekwa nchekwa 50 nwere kamera ara na 50 na-enweghị kamera ahụ. Otu abuo a yiri otu na ebe nlekota ndi mmadu ha. Ọmụmụ ihe omumu a, emere na mmekorita ya na Mahadum Arizona, chịkọtara na ndị ọrụ nchekwa na-enweghị igwe eji ahụ mmadụ nwere okpukpu atọ karịa ụmụ amaala. Na mgbakwunye, ọmụmụ ahụ nyekwara nkwubi okwu na ndị ọrụ nchekwa ahụ nke na-eyi igwefoto ahụ na-eyi nwere mbelata 75% n'iji mkpesa ike na mbelata 40% na mkpesa ụmụ amaala site na afọ gara aga nke kamera ahụ. ejighi ya.
Ihe omumu abuo a gosiputara na igwefoto ndi ahu ndi nwere ihe eji eche nche na netiti nke gọọmenti n'ihi nsonaazụ di egwu na-akowa na igwefoto ndi ahu mechiri. Nke a bụ otu akụkụ ga-eduzi n'akụkụ abụọ ahụ site na ịmụrụ anya nke idekọ ihe merenụ. Onye isi uwe ojii Greensboro Ken Miller na-ekwu na anyị na-agba ndị ọrụ anyị ume ka ha mee ka ndị mmadụ mara na ha na-edekọ n'ihi na anyị chere na ọ na-ebuli omume n'akụkụ abụọ nke igwefoto.
Enwere ike iji ndekọ vidiyo sitere na ndị ọrụ na-eji igwefoto ahụ na-eyi uwe iji dozie nsogbu nke ngalaba ahụ. Ọ bụkwa akụrụngwa ọzụzụ bara uru. Na nyocha emere n'oge na-adịbeghị anya site n'aka ndị isi ndị uwe ojii gburugburu obodo banyere iji vidiyo kamera ahụ, 94% nke ndị zara zara kwuru na ha na-eji ya maka ntụgharị site n'aka ndị nchịkwa iji dozie akparamagwa ndị uwe ojii ma ọ bụ dịka akụrụngwa ọzụzụ. Igwefoto igwefoto ahu nwere ihe nlere buru ibu nke nkuzi. Ka ị na-enyocha ihe onyonyo, ndị na-achị achị nwere ike ịtụle atumatu dị ugbu a wee kpebie ma ekwesịrị ịmegharị usoro dabere na ezigbo ndị uwe ojii. Ngalaba a na-enye ọzụzụ nwere ike igbanye ọnọdụ a kapịrị ọnụ iji zụọ ndị isi ya dabere na ezigbo oku n'ọhịa. Na mgbakwunye, ọzụzụ ndị uwe ojii nwere ike ugbu a ka ọ bụrụ onye ọrụ gị ma ọ bụ ngalaba ime ụlọ.
Ikekwe otu n'ime uru kachasị ukwuu na ndị mmanye iwu ga-anata ma na-edepụta ihe akaebe maka nyocha mpụ. Ọzọkwa, ọ bụ naanị ngwaọrụ ọzọ nwere ike inye aka na ikpe na-aga n'ihu nke ndị omempụ. Mgbe ndị uwe ojii zaghachiri na ọnọdụ mpụ ahụ, ihe kachasị na-elekwasị anya na nchegbu mbụ bụ ichekwa ọnọdụ ahụ na inyere ndị ọdachi ahụ aka na enyemaka enyemaka mbụ. Ka ha na-amalite ajụjụ ọnụ ha ma na-agba mbọ ijikọ ihe merenụ, o siri ike ịtụle nkọwa niile. Site n'iji igwefoto eyi ya, onye uwe ojii ahụ nwere ike idekọ ebe ahụ na ọtụtụ nkọwa nkeji nke agaraghị efu. Ka ha na-agagharị ebe mmebi iwu ahụ, ha edekọtara ya dịka ọ na-aza nzaghachi n'oge. Ngwá ọrụ a nwere ike inye ndị uwe ojii ihe ọmụma na-abịakarị nke ọma mgbe eziokwu ahụ kwụsịrị ma ọ naghị eme ngwa ngwa. Onye isi uwe ojii Dalton Parker na-ekwu na n'adịghị ka igwefoto n'ime ụgbọ ala, igwefoto ahụ nwere uwe na-edekọ ihe ọ bụla na-eme ka njem ndị uwe ojii na gburugburu mpụ ahụ ma gbaa ọtụtụ mmadụ ajụjụ ọnụ. Igwefoto ahụ nwere eyi bara uru nke ukwuu na ịchekwa ozi ziri ezi.
A na-agbakwa ndị ọka ikpe gburugburu ume ma nwekwa nnukwu ike itinye aka na ụlọ ọrụ iji nweta teknụzụ a. Inwe ndekọ vidiyo igosi n'ụlọ ikpe bụ ihe siri ike ichebe. Na Kentucky, onye ọka ikpe na-ahụ maka nchekwa mpaghara kpebiri maka inye vidiyo igwefoto ahụ. Ọ na-eme ka ọ dịrị ha mfe karị ịghọta ihe na-eme mkpesa jọgburu onwe ya ga-abụ maka ọdịmma ha kacha mma, n'ihi na ịchọghị ka ndị otu ikpe na-ahụ nke a. Nke a bụ eziokwu maka ikpe ihe ike gbasara ezinụlọ mgbe enyere vidiyo vidiyo n'ụlọ ikpe. Ọtụtụ oge, ọkachasị ma ọ bụrụ na e nwere usoro mmetọ na ndị a na-atụ ụjọ na-atụ ụjọ, ha achọghị pịa ebubo. Proofchịkọta ihe akaebe siri ike na kacha mma. Ihe ejikọtara ya na ndị na-enweghị enyemaka na ikpe ikpe bụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe na-agaghị ekwe omume. Site n’inye ndị ọka ikpe ihe ngosi vidiyo mgbe ha bịarutere ebe a, ọ ga-ejide akparamagwa nke ndị mmadụ metụtara na ndị a na-enyo enyo yana mmerụ ahụ ọ bụla echebere. Na-enye ndị ọka iwu ihe ọmụma a, ha nwere ike ikpe ikpe ọbụlagodi ma ọ bụrụ na onye ahụ tara ahụhụ jụrụ ebubo ma ọ bụ jụ inye nkwupụta. Onye isi Miller nke Topeka kwuru na mgbe anyị gosipụtara ndị a na-enyo enyo na ikpe ihe ike ezinụlọ na-eme ihe ndekọ vidiyo site na igwefoto ahụ na-eyi ahụ, mgbe mgbe, ha na-arịọ ndị mere mkpesa na-enweghị ọbụna ịga ikpe.
Na nchikota, igwefoto ahu ahu dokwasiri otutu nsogbu na nchebara aka nke ndi omebe iwu ma gh okwa netiti ndi ochichi.
Nzuzo 5948 1 Echiche Taa